Banaanbax lagu cambaareyay Falalkii Somalida South Africa oo Muqdisho ka dhacay+sawiro – SBC
Banaanbax lagu cambaareyay Falalkii Somalida South Africa oo Muqdisho ka dhacay+sawiro
Magaalada Muqdisho caasimada dalka maanta oo axad ah waxaa ka dhacay Banaan bax balaaran oo ay isugu soo bexeen dadweyne aad u tiro badan kaas oo loogaga soo horjeeday dhibaatooyinka arxan darada ah ee ay shacabka Dalka Koonfurta Africa kula dhaqaaqayaan muwaadininta Soomaalida ah ee dalkaas ku dhaqan.
Boqolaal qof oo ka kala yimid xaafadaha demooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho ayaa goob joog ahaa banaan baxan oo ka dhacayay xarunta daljirka daahsoon ee magaalada Muqdisho.
Waxaa soo qaban qaabiyay banaan baxan maamulka gobolka Banaadir iyadoona ay ka soo qeyb galeen masuuliyiinta ugu sareysan gobolka Banaadir iyo xubno kale oo ka tirsan dowlada federaalka Soomaaliya.
Dadkii goobta ku sugnaa ee u soo ban baxay sidii ay u cambaareyn lahaayeen dhibaatooyinkaas ka dhanka ah muwaadininta Soomaaliyeed ayaa ku qeylinayay ereyo loogaga soo horjeedo dilalkaas iyo dalka south Africa, waxayna wateen calanka Soomaaliyeed iyo boorar ay ku xardhan yihiin ereyo iyo sawiro cambaareyn ku ah dhacdooyinkii lagula kacay Soomaalida Koonfur afrika.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna duqa magaalada caasimada ah ee Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa la hadlay Shacabkii isu soobaxay waxaana uu sheegay in talaabada arxan darada ah ee ay qaadeen shacabka dalka Konfurta afrika ay noqoneyso mid cawaaqib xumi ku keeni kara wada shaqeynta iyo saaxiibtinimada labada wadan, isagoona ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan dowladaasi uga hadasho kana bixiso magdhow iyo raali gelin.
Banaan baxan oo ahaa mid balaaran ayaa ku soo dhamaaday si wanaagsan, waxaana shacabkii halkaasi ka soo qeyb galay ka muuqaneysay carada ay ka qaadeen dhibaatooyinka aan loo dulqaadan karin ee ganacsatada Soomaaliyeed loogu geystay magaalooyinka dalkaasi South Africa.